Daawo Khudbadii Madaxwayne Axmed Siilaanyo Ee 18 May | Hawraar
May 18, 2016 Xiisaha/Xulashada
Daawo Khudbadii Madaxwayne Axmed Siilaanyo Ee 18 May
Madaxwaynaha Jamhuuriyada Somaliland Mude Axmed Maxamed Maxamud Siilaanyo ayaa waxa uu saaka munaasibadii 18 ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa isaga oo uu madaxwaynuhu ku nuux nuuxsaday xidhiidhka Somaliland iyo Jabuuti
• Waxaynu yagleelnay qaran taabo-gal ah, oo buuxiyey dhammaan shuruudihii dawladnimo.
• Waxaynu tirtirnay keli-talisnimadii iyo nidaamkii ku dhisnaa amar ku taagleynta.
• Waxaynu meel-marinay doorashooyin xor ah iyo nidaam dimuqraadiyadeed oo ay inagaga dayan karaan dalal badan oo dunida laga aqoonsan yahay.
• Waxaynu xaqiijinay in aynu khilaafka dhexdeena ku xalinno xigmad siyaasadeed iyo xeer-beegtinimo salka ku haysa dhaqankeena soo-jireenka ah, iyadoo aanay cidina gacan ka geysan ama la ina dhexgelin, taas oo muujinaysa bisaylka Bulshada Somaliland.
• Waxaynu ku tallaabsanay horumar mug iyo miisaan leh oo wax-weyn ka bedelay adeegyada aasaasiga ah ee bulshada, kaabayaasha dhaqaale iyo hantida gaarka loo leeyahay.
• Haddii Soomaliyi wada noolaan kari weyday, wuxuu caqliga fayoobi ina farayaa inay iskeed u kala noolaato.
• Haddii wax la wadaagi kari waayo, waxa furan in wax la kala yeesho.
• Waxaan ugu baaqayaa Beesha Caalamka, gaar ahaan Dalalka Midawga Yurub, Maraykanka, Midawga Afrika, Jaamacadda Carabta, Dawladaha IGAD in ay garwaaqsadaan qadiyada iyo xaqa aayo-ka-tashiga Shacbiga Somaliland, isla markaana aqoonsadaan qarannimadooda.
• Waxaan xog-ogaal ka ahay in qaar ka mid ah madax-dhaqameedyada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Gobolka Sool iyo Sanaag Bari ay ku jirto tabasho iyo saluug. Somaliland waxay ku soo caano-maashay in khilaafka dhexdooda yimaadda ay ku dhamaystaan wada-hadal, is-qancin iyo isu-tanaasul.
• Shacbi-weynaha Somaliland waxaan ugu baaqayaa:
In ay meel uga soo wada-jeestaan ilaalinta qarannimadooda, adkaynta nabadda iyo deganaanshaha dalkooda.
In ay u midoobaan maslaxadda iyo danaha guud ee dalka.
In ay meel uga soo wada jeestaan horumarka iyo dhismaha dalka.
In ay si mug leh uga qayb-qaataan Diiwaangelinta Cod-bixiyayaasha iyo Doorashooyinka dhici doona 27-ka bisha March 2017-ka.